ရှုမြော်ကာငေး ကျောက်ဖြူမြို့အလှလေး - Myanmar Network
Posted by Myo Myint Kyaw on September 9, 2012 at 16:03 in General Chit Chat (ရောက်တတ်ရာရာ)
ကျွန်တော်က ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပါ…/လုပ်ငန်းတာဝန်ကျရာနေရာတွေကို သွားနေရတာပါပဲ
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ Myanmar-China Gas Pipeline လုပ်ငန်း Project မှာ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီက CNPC Oil and Gas Transportation Management Office ကို တာဝန်ယူတည်ဆောက်နေတဲ့ Company တစ်ခုပါ… အဲ့ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ကျောက်ဖြူကို ရောက်လာတော့တာပါ…….
အဖေက ကရင်၊ အမေက ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်တဲ့ မိဘနှစ်ပါးက မွေးလာတဲ့ ကျွန်တော် ကပြားလေးတစ်ယောက် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ တတ်ကြွဝမ်းသာနေတာပေါ့…….
မအီဆိုတဲ့ မြို့လေးမှာ ကားခဏရပ်တော့ နေကလည်းပူ…ကားစီးရတာကလည်း အိုက်၊ ရေကလည်းဆာ ဆိုတော့. ဖရဲသီးသည်ကိုတွေ့တော့ ၀ယ်စားမိတယ်…….
အဲ့ဒီမှာစတာပဲ…… “ ဖရဲသီး တစ်စိတ် ဘယ်လောက်လဲမသိဘူး…….တစ်စိတ်ပေးပါ” ဆိုပြီးဝယ်မိတယ်…
“တစ်ပေါက်ကို ၅၀ ပါ” လို့ပြန်ဖြေတော့ ရုတ်တရက် ကျွန်တော်တို့ကြောင်သွားတယ်….ကျွန်တော်တို့လို့ ပြောတာက ကျွန်တော်နဲ့အတူ HSE (Health, Safety and Environment) တာဝန်ထမ်းဆောင်မယ့် ညီတစ်ယောက်လည်းပါတယ်……နှစ်ယောက်စလုံး မင်တက်သွားပါတယ်……..
ဖရဲသီးတစ်စိတ်ကို တစ်ပေါက်လို့ ပြောသွားတဲ့ အသံဝဲ၀ဲလေးနဲ့ ဘာသာစကားဖလှယ်သွားတာကို …..
အဲ့ဒီလိုနဲ့ ကျောက်ဖြုရောက်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်လာတာ အခုဆို (၇)လတောင်ကြာမြင့်လာပါပြီ... တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ ညနေခင်းတစ်ခုမှာ ကျနော်က အလုပ်သမားတွေအခြေအနေကို Site ထဲ သွားကြည့်တော့... အလုပ်သမတစ်ယောက်က ပြောတယ်..
သူဘာပြောလိုက်မှန်းမသိဘူ....အဲ့ဒီထဲက မြန်မာစကားတတ်တဲ့တစ်ယောက်က မိုက်လာပြီဆိုတာ မှောင်လာပြီလို့ပြောတာ လို့သိရတော့... ကျနော်ကိုယ်တိုင်အသံထွက်တောင်ရယ်မိတယ်..
အဲ့ဒီတော့ ကျနေ်ာက သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပြန်ပြောမိတယ်........"မမိုက်သေးပါဘူးဟာ... စောပါသေးတယ်လို့"
အဲ့ဒီအလုပ်သမလေးကပဲ "မ၀ါနဲ့နော်.." တကယ်မိုက်လာလို့ပြောတာ" ဆိုပြီးထပ်ပြောတယ်
အဲ့ဒီမှာလည်းစကားလုံးတစ်လုံးသိလာရတယ်...၀ါ = လိမ်ညာပြောဆိုခြင်း ပေါ့.......
ဒီလိုနဲ့ ကျောက်ဖြူမှာ နေသားကျလာတော့ သူတို့ရဲ့ ရခိုင်စကားဝဲသံတွေလည်းနားယဉ်လာပြီး
ကျောက်ဖြူမြို့ရဲ့အကြောင်း ဗဟုသုတအနေဖြင့် တစ်စေ့တစောင်းပြောပြချင်တာကြောင့် ဖော်ပြရေးသား လိုက်ပါတယ်.
ကျောက်ဖြူမြို့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရမ္မာဝတီခေါ် ရမ်းဗြဲကျွန်း၏ မြောက်ဘက်ဖျားရှိဘင်္ဂလာကမ်းခြေအနီးတွင် တည်ရှိနေသော မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပေသည်။ ရှေးအခါက ရခိုင်ပြည်ကြီးတွင် ၀တီလေးရပ်အပါအ၀င် တိုင်းကြီး(၁၂) တိုင်း ရှိခဲ့ဘူးပါသည်။ ထိုတိုင်းများထဲတွင် ရမ္မာဝတီ (ခေါ်) ရမ္မာပူရကျွန်းလည်း တိုင်းတစ်ပါးအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့လေ သည်။ (ဤရမ္မာပူရကျွန်းအား နောက်တစ်နည်းအဆိုအရ ကဿဖဘုရားသခင်လက်ထက်တော်အခါက တစ်ပါးသော နေ့တစ်နေ့တွင် ဘုရားသခင်သည် ရဟန္တာများနှင့် ကောင်ကင်စံခရီးကြွတော်မူရာတွင် ရခိုင်ပြည် ၏ အလယ်ဗဟိုကျသောာ ပင်လယ်ထဲတွင် ၀မ်းဘဲငှက် ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော ကျွန်းငယ်တစ်ခုပေါ်သို့ ဆင်းသက် ရပ်နားတော်မူပြီး၍ ကျွန်းငယ်အား နောင်တွင် ၀မ်းဘဲကျွန်း ဟုအမည်တွင်အံ့ဟူ၍ ဖျာဒိတ်ထားခဲ့တော်မူသည် ။ ယခုကာလကြာရှည်လာခြင်းကြောင်း ရမ်းဗြဲကျွန်းဟူ၍ ပြောင်းရွှေ့ခေါ်ဆိုကြကြောင်း အဆိုရှိခဲ့လေသည်။)
၁၈၂၄-၁၈၂၆ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာတို့ ပထမအကြိမ်စစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပွားရာတွင် ရခိုင်ပြည်အား အင်္ဂလိပ်တို့ သိမ်းယူရရှိပြီးနောက် လေးခရိုင်ပြုလုပ် အုပ်ချုပ်ခဲ့လေသည်။
(၃) ရမ်းဗြဲခရိုင် နှင့်
၁၈၃၇ ခုနှစ်တွင် အမ်းခရိုင်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး ကျောက်ဖြူခရိုင်အဖြစ် ပြောင်းယူအုပ်ချုပ်ခဲ့လေသည်။
၁၈၅၂ ခုနှစ်တွင် ရမ်းဗြဲခရိုင်ကိုဖျက်သိမ်းပြီး အမ်းခရိုင်နှင့် ရမ်းဗြဲခရိုင် နှစ်ခုကို တစ်ခုတည်းအဖြစ်ပူးပေါင်း၍ ကျောက်ဖြူခရိုင်အဖြစ် ပြုလုပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့လေသည်။ ကျောက်ဖြူမြို့ဟု ခေါ်တွင်ရခြင်းမှာ လှပဖြူဖွေးသော ကျောက်စရစ်လုံးများ ပေါများစွာရှိခြင်းတို့ကြောင့် ကျောက်ဖြုမြို့ဟု အမည်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေ သည်။ ကျောက်ဖြူမြို၏ အကျယ်အ၀န်းမှာ အလျား(၂)မိုင် ၊ အနံ(၁)မိုင်ခွဲခန့်ရှိပါသည်။ မြေမျက်နှာပြင်မှာ တောင်ကုန်း များ၊ ချိုင့်ဝှမ်းများ မရှိဘဲ ညီညာပြန့်ပြူးလျှက်ရှိပါသည်။
ရန်ကုန်မှလာသော် ကျောက်ဖြူမြို့သို့မရောက်ခင်…. (ကျောက်ဖြူ-ရမ်းဗြဲလမ်းမကြီး) ကံကော်တောဘုရားသို့ ဖူးရန် လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်လေးကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်… (အခုတော့ ၄င်းလမ်းမကို Myanmar-China Gas Pipeline Project သို့ သွားသော Main လမ်းအဖြစ် ကားမျိုးစုံဖြင့် ၀င်ထွက်သွားလာနေကြပါသည်။)
အခါကြီးရက်များ၊ ဥပုသ်ရက်များတွင် ကံကော်တောဘုရားတွင် ဖူးမြော်သူလူများစည်ကားလှပါသည်။ မြို့လုံးကျွတ် လာရောက်ကြသလို နီးစပ်ရွာ ရွာများပါမကျန် ဘုရားပေါ်တွင် စည်ကားလှပါသည်။ ရှေးအခါက ၄င်းနေရာတစ်ဝိုက်တွင် ကံကော်ပင်များမှလွဲ၍ တစ်ခြားမည်သည့်အပင်မျှ မပေါက်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ရာပေါင်းများစွာ သော ကံကော်ပင်များသာ ပေါက်ရောက်ခဲ့သောကြောင့် ကံကော်တော ဟု ရှေးယခင်က ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့ကြ ပေသည်။ ယခုတွင့် လေပြင်းမုန်တိုင်းဒဏ်အကြိမ်ကြိမ်ခံရခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ထင်းခုတ်ကြသော တောခုတ်သမားများ၏ မဆင်ခြင်ဘဲ ခုတ်ယူဖြုန်းတီးခြင်းတို့ကြောင့် သိမ်တော်ဘက်သို့ ဦးညွတ်နေသော ကံကော်ပင် (၇)ပင်သာ ကျန်ရှိနေပါတော့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ကံကော်တော်ဘုရားလမ်းထိပ်မှဆက်ပြီးလာသော် ကျောက်ဖြူမြို့အ၀င်မှာ ကျောက်တစ်လုံးဘုရားရှိပါတယ်.. ကျောက်ဂူထဲမှာ ဘုရားတည်ထားတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်..ဘုရားဂူထဲဝင်ပြီး စိတ်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ တရားထိုင်တဲ့ သူထိုင်နဲ့ အခါကြီးရက်၊ဥပုသ်ရက်တွေမှာ တရားဘာဝနာပွားများနိုင်ပါတယ်။
၄င်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ကမ်းခြေအလှတစ်ခုဖြစ် တဲ့ နတ်ကျောက်တောင် ရဲ့ ရှုခင်းအလှကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။ ( ရွာခံတွေရဲ့ ပြောဆိုမှုအရ ကျောက်တစ်လုံးဘုရားမှ နတ်ကျောက်တောင်သို့ သွားတဲ့ ဥမင်လမ်းတစ်ခုရှိကြောင်းနှင့် အရင်တုန်းက ၄င်းလမ်းကို ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း ၊ သို့သော်လည်း ၄င်းလှိုဏ်ဂူအတွင်း အမြင်မတော်သော ချစ်သူစုံတွဲများကြောင့် အခုပြန်လည်ပိတ်ထားရကြောင်း သိရှိရပါသည်။)
နတ်ကျောက်တောင်ကို အဝေးမှ မြင်ရစဉ်။
ကျောက်တစ်လုံးဘုရားကို ဖူးမြော်ပြီးပြီ (သို့) နတ်ကျောက်တောင်မှာ ၀င်ပြီးလည်ပတ်ခဲ့ပြီးရင်ဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် (၁၀)မိနစ်လောက် ကားနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဆိုင်ကယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျောက်ဖြူမြို့အ၀င်မှာ ခမ်းခမ်းနားနားနဲ့ကြိုဆိုသွားတဲ့ ကျောက်ဖြူမြို့အ၀င်ဆိုင်းဘုတ်ကို တွေ့ရှိရပါမယ်။
(မြို့မှထွက်ခွာသည့်ဘက်မှရိုက်ကူးထားသည့်ပုံ :D :)
အဲ့ဒီရဲ့အနီးအနားမှာ နဒီသောင်ယံ ဥယျာဉ်တစ်ခုရှိပါသေးတယ် အနားယူအပန်းဖြေရင်း ရေကူးမလား၊?? သောင်ပြင်မှာလမ်းလျောက်မလား၊?? ခရုခွံတွေလည်းကောက်ဦးမလား၊??? ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး၊ကားမောင်းလို့လည်းရနိုင်သေးတယ်နော်၊??? မောလို့ အစာပြေစားသောက်ဖို့ဆိုရင်လည်း ဆိုင်ကလည်း ကပ်လျှက်ပါပဲ။(နည်းနည်းတော့ ဈေးကြီးတာပေါ့ :P)
ကျောက်ဖြူမြို့ရဲ့ ညနေခင်းအလှတစ်မျိုးကိုလည်း ဒီလိုမျိုးကြည့်ရှုခံစားနိုင်တာပေါ့။
တံငါသည်တွေရဲ့ ဘ၀အလှတစ်ခုပါ …
ဆောက်လုပ်လျှက်ရှိသော ကျောက်ဖြုမြို့၏ အမှတ်(၁) ဆိပ်ကမ်းဘောတံတား
ဒါကတော့ ပင်လယ်ထဲကတက်လာတဲ့ ကျောက်ဖြူမြို့က လှည်းကလေးပါ... တစ်ခါတစ်ရံ ပင်လယ်ကထွက်တဲ့ အစားအစာကို သယ်ဆောင်တတ်သလို့ တစ်ခါတစ်ရံ ထင်း၊ ကျောက်ကြီးနဲ့ မျှောတိုင်တွေလည်း သယ်ဆောင်တတ်ပါသေးတယ်
ကျောက်ဖြူမြို့ထဲမှာတော့ ထူးထူးခြားခြားရယ်လို့မရှိပါဘူး။ အကျယ်အ၀န်းပေါ်မူတည်ပြီး ပြည်သာယာဈေးနဲ့စည်ပင်ဈေးရုံ(၂)ရုံ ရှိပါတယ်၊ ဈေးဝယ်ခြမ်းရတာတွေလည်း စိတ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်။ (ရန်ကုန်ဈေးနဲ့စာရင်တော့ နည်းနည်းတော့ ဈေးကြီးပါတယ်) မြို့လယ်ခေါင်တည့်တည့်မှာ နာရီစင်တစ်ခု ရှိပြီး နာရီစင်ဘေးမှာတော့ အ.ထ.က ကျောင်း (ကျောက်ဖြူ) ကို တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ကျောက်ဖြူပညာရေးကောလိပ်ကလည်း နှစ်စဉ် ဆရာ/ဆရာမ တွေကို မွေးထုတ်ပေးနေကြပါသေးတယ်။ ပညာရေးကို မိဘများအလေးထားကြတာကိုလည်း တွေ့မြင်ရပါတယ်။
ဘဏ်အနေဖြင့်တော့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်(ကျောက်ဖြူ)နဲ့ မွေး/ရေဘဏ် နှစ်ခုရှိပြီး ကျောက်ဖြူမြို့ရဲ့ အဓိကအားထားရာ ငွေလွဲဘဏ်တွေပါ။
ရောက်လည်သူဧည့်သည်တွေတည်းခိုရန်နေရာအတွက်လည်း မပူပင်ရပါဘူး။ Hotel အဆင့်ရှိ တည်းခိုခန်းတွေ မှာလည်း စရိတ်စက သက်သာစွာဖြင့် အထက်တန်းကျကျတည်းခိုနိုင်ပါသေးတယ်။
အပျော်အပါးကြိုက်သူများအတွက် သီချင်းဆိုရန်အခန်းများလည်းရှိပြီး အလှအပရေးရာတွက်လည်း ခေတ်နဲ့အမှီ Beauty Spa တွေရှိတဲ့အပြင် ကျန်းမာရေးလိုက်စားသူများအတွက်လည်း Body Fitness Center တွေလည်းရှိကြပါတယ်။ (ပိုက်ဆံသာရှာတတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်)
ဒါ့အပြင် ကျောက်ဖြူမြို့သူမြို့သားတွေ ဟာ အခါကြီးရက်တွေရောက်တိုင်း ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ဥပုသ်သည်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်ပြီး ကုသိုလ် ယူနေကြတာ ကို တွေ့သည့်အပြင် ကြီးငယ်မရွေး ဘာသာတရား လိုက်စားကြတာကို သိရှိခဲ့ရပါတယ်။
ကျောက်ဖြူမြို့ကို လာလည်ရင်တော့ ကားလမ်းအပြင်၊ ရေလမ်းနှင့် လေကြောင်းလိုင်းတို့ဖြင့်လည်း လာရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။
ကျောက်ဖြူမြို့အပြန် လက်ဆောင်အဖြစ် ငါးမုန့် (ငါးပါပလာ)၊ ပင်လယ်ထွက်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ငါးခြောက်၊ ပုဇွန်ခြောက် ၊မျှင်ငပ်ိတို့အပြင် ရခိုင်လုံချည်၊ထမီ အစရှိသဖြင့် ဈေးနှုန်းသက်သာစွာ ၀ယ်သူသွားနိုင် ပါသေးကြောင်းနှင့် ကျောက်ဖြူမြို့ကို အချိန်ရမယ်ဆိုရင် အလည် တစ်ခေါက် ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။
နောင်နှစ်တွေကြာလာမယ်ဆိုရင် SEZ (Special Economic Zone) ဖြစ်လာမည့် ကျောက်ဖြူမြို့ အတွက်တော့ ဒီထက်မက စည်ကားလာဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
(ကျနော်ရေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ ကျောက်ဖြူမြို့အတွက် ပြည့်စုံချင်မှပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။ ရောက်ရှိနေစဉ် (၇)လကျော် ကာလအတွင်း မျက်မြင်သိရှိထားသမျှကိုသာရေးသားရသည့်အတွက် အမှားအယွင်းများပါရင် နားလည်ခွင့်လွတ်ပေးကြပါ။ သိရှိထားသူများရှိပါက ဖြည့်စွက်ရေးသားပေးကြ ပါ)
Permalink Reply by 2cuszqk2sitlx on September 10, 2012 at 19:57
i like it,one of my brother worked in there(myanmar_china gas pipeline),like that u.
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on September 11, 2012 at 9:51
thank.. my dear thetthetkhaing.
Permalink Reply by 2cuszqk2sitlx on September 10, 2012 at 19:59
then photo is so beautiful.
Permalink Reply by Tintin on September 10, 2012 at 20:10
Permalink Reply by Lwae Thandar Htwe on September 10, 2012 at 21:12
really beautiful......wanna visit there
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on September 11, 2012 at 8:43
All of my fri,
If u haveatime, Warmly Welcome to Kyaukphyu..
Permalink Reply by Dr.Kin Sa Na Toe on September 11, 2012 at 11:46
thanks for your post.. My husband is now duty assign at there.. So I need to know about the city.. Thanks u par..
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on September 12, 2012 at 13:42
ွGlad to meet u Dr.Kin Sa Na Toe
I know ur husband ans he is Project Engineer at our site.
whatever glad to meet u Doctor and thank for ur encouragement.
Permalink Reply by Mya Mya Thin on September 12, 2012 at 8:19
I also like this that program and view , I have n 't seen these buddha statute , precious to prey!…
Permalink Reply by Nilar on September 12, 2012 at 17:16
Very nice place, i would like to go there.
Permalink Reply by aung aung on September 18, 2012 at 15:13
prey=An animal hunted and killed by another for food
Permalink Reply by winwin on September 12, 2012 at 15:12